Xanta cusub ee ku saabsan Apple Watch "G-SHOCK" | waxaan ka imid mac
Had iyo jeer waxaa i xiiseeya saacadaha summada Casio. Tan iyo markii aan lahaa kii ugu horreeyay oo leh xisaabiyaha, dugsiga sare, had iyo jeer waxaan gashan jiray mid ka mid ah saacadaha Japan ee gacantayda gacanta. Ama dhismo la xidho, ama G-SHOCK lagu ciyaaro ciyaaraha. Ilaa hal maalin oo wanaagsan Tim Cook wuxuu ka soo muuqday mid ka mid ah qoraalladiisa dhowr sano ka hor oo na baray Apple Watch.
Laakiin ujeedku waa in aan wali isticmaalo a G-NAXDIN wakhti gaar ah oo usbuuca ah: Marka aan ku sameeyo fadhiga saunada qolka jimicsiga. Apple waxay ku talinaysaa inaan Apple Watch u soo bandhigin heerkulka jawiga sare ee saunada, markaa had iyo jeer waxaan kaga tagaa sanduuqa, wakhtigaas yarna waxaan xidhaa Casio G-SHOCK. Laakiin tani way isbedeli kartaa sanadka soo socda oo ay ka fariisan kartaa Japan si wanaagsan…
Mark Gurman kaliya wuxuu ku dhajiyay baloogiisa ku saabsan Bloomberg Ujeedooyinka Apple ee sanadka soo socda Apple Watch. Koontada in shirkadu ay sii deyn doonto cusboonaysiinta Apple Watch SE iyo Apple Watch cusub sida Casio G-SHOCK, ciyaaraha ba'an.
U sharax midda xigta taxane ah 8 ee Apple Watch, waxay sidoo kale cusbooneysiin doontaa Apple Watch SE hadda. Apple caadi ahaan ma cusboonaysiiso aaladaha "SE", sida iPhone SE, sanad walba. Marka la eego in Apple aysan sameynin cusbooneysiin sanadkan, moodel cusub ayaa loo malayn karaa in la filayo 2022.
Apple Watch ee khadka Casio G-SHOCK
Waxayna u muuqataa in Cupertino ay sidoo kale qorsheynayaan nooc cusub oo Apple Watch ah oo loogu talagalay ciyaartooyda isboortiga. Waxay noqon doontaa nooca "Sport" ee Apple Watch oo leh adkeysi la xoojiyey. Apple Watch cusub oo leh nashqad «Aad uxun»Kaas oo yeelan kara guri adkaysi u leh xagashada, godadka, dhibcaha, kuuskuuska, iwm.
Waa run in maanta suuqa ay jiraan daboolo badan oo lagu dhejiyo Apple Watch oo ka dhigaya mid adkaysi u leh, oo leh muuqaal isboorti oo aad u daran, laakiin runtu waxay tahay in ay yihiin kaliya daboolo fudud oo lagu dhejiyo Apple Watch, ma aha. mid loo qaabeeyey oo loo soo saaray inuu u adkaysto bay'ad aad u daran, sida haddii ay dhab tahay Casio G-SHOCK. Waan arki doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Warar xan ah oo cusub oo ku saabsan Apple Watch "G-SHOCK"
Sida loo maareeyo kordhinta Safari ee macOS Monterey
Gurman wuxuu ka hadlayaa Mac-yada cusub ee 2022 oo uu ku jiro Mac mini